तरकारी बजारको व्यवस्थापन | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय तरकारी बजारको व्यवस्थापन
on: ६ भाद्र २०७५, बुधबार ०६:३२ सम्पादकीय
तरकारी बजारको व्यवस्थापन
कालीमाटी तरकारी बजारमा सरकारी अनुगमनको विरोध भयो । विरोध गर्ने केही व्यवसायी पक्राउ पनि परे । व्यापारीले तरकारी विक्री बन्द गरेको घोषणा गरे । किसानहरूसँग सस्तोमा खरीद गरी महँगोमा तरकारी बेच्ने व्यापारीको विरोध धेरैले गरे । सरकारी कदमको समर्थन गर्ने पनि देखिए । सरकारले तरकारीमा पनि सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनी प्रचारबाजी गर्‍यो । यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले त्यहाँको बेथिति अलिकति पनि अन्त्य गर्न सकेन । तरकारी बजारमा पनि सरकारले यस्तै गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, क्षणिक चर्चा बटुल्ने कामबाट तरकारी तथा कृषिबजारको समस्या समाधान हुँदैन । बिचौलियाको विरोधले मात्रै पनि किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन्, उपभोक्ताले सस्तोमा तरकारी खरीद गर्न पनि पाउँदैनन् । त्यसो भए सरकारले कहिलेकाहीँ यस्तो अनुगमन किन गर्छ त ?
सरकारले केही काम गर्दै छ भन्ने देखाउन मात्रै यस्तो अनुगमन हुने गरेको हो । ऊ यो समस्याको दिगो समाधान चाहँदैन । सरकार साँच्चीकै कृषिबजार व्यवस्थित र नियमन गर्न चाहन्छ र गम्भीर छ भने विकल्प धेरै छन् । तर, सरकारस“ग अठोट र निर्णयशक्ति चाहिन्छ ।
तरकारी बजारमा बेथिति छ । यो जगजाहेर तथ्य हो । त्यसलाई सुधार गर्नैपर्छ । तर, तरकारी बजारको सुधारका नाममा भएका काम टालटुले र चर्चा बटुल्ने खालका मात्रै छन् । कालीमाटी वा टेकुको तरकारी बजारमा हस्तक्षेप गरेर केही परिवर्तन हुँदैन । यसका लागि अहिलेको पद्धतिमा नै आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
कालीमाटीमा तरकारी आपूर्ति गर्ने ठूला बिचौलियाहरूले पनि कर तिर्दैनन् । उनीहरूको कारोबार करोडौं रुपैयाँको पनि हुन्छ । त्यही भएर उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य किसानसमक्ष पनि पुग्दैन, सरकारले कर पनि पाउँदैन ।
तरकारी बजारलाई मूल्य (आपूर्ति) शृङ्खलामा जोड्ने हो भने कालीमाटी र अन्य थोक तरकारी बजारमा रहेका हरेक पसलेले तरकारी खरीदविक्रीको बिल राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पसलेले कतिमा खरीद गरेको हो ? कतिमा बेचेको हो ? भन्ने खुलाउन बिलबीजकको व्यवस्था हुनेबित्तिकै तरकारीको आपूर्ति औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध हुन्छ । कालीमाटी वा अन्य कुनै थोक बजारमा ल्याएर तरकारी बेच्ने बिचौलियाले कतिमा बेच्यो र व्यवसायीले कति प्रतिशत मुनाफा लिए भन्ने यसले स्पष्ट पार्छ । खरीद विक्री गर्दा बिल अनिवार्य भयो भने आपूर्ति कति भयो र माग कति छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । त्यस्तै बिचौलियाले बढी रकम खाएकाले तरकारी महँगो भयो, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरे पनि किसानले उचित मूल्य पाएनन् भन्ने अहिलेको भनाइ कति सत्य हो भन्ने पनि यसबाट थाहा हुन्छ । कालीमाटीमा तरकारी ल्याएर बेच्नेले किसानसँग तरकारी खरीद गर्दा कतिमा तरकारी खरीद गरेको हो ? त्यसको रसिद किसानहरूलाई दिनुपर्छ । जति तहमा यो खरीदविक्री हुन्छ ती सबै तहमा बिल अनिवार्य गरेपछि कुन तहमा कति मूल्य बढाइएको छ त्यो पनि स्पष्ट हुन्छ । बिचौलियाहरू पनि आपूर्तिको औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध हुन्छन् ।
अर्को, तरकारीमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लगाइनुपर्छ । अहिले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा यसलाई करको दायराबाट बाहिर राखिएको छ । कर छूट गर्दा न्यून आय भएका किसानको हित भएको होला । तर, ठूला कृषकहरूले कत्ति पनि कर नतिर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । कालीमाटी तरकारी बजारका व्यापारीहरूले दैनिक लाखौं रुपैयाँको कारोबार गरे पनि सरकारलाई १ रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । कालीमाटीमा तरकारी आपूर्ति गर्ने ठूला बिचौलियाहरूले पनि कर तिर्दैनन् । उनीहरूको कारोबार करोडौं रुपैयाँको पनि हुन्छ । त्यही भएर उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य किसानसमक्ष पनि पुग्दैन, सरकारले कर पनि पाउँदैन । किसानलाई बजारसँग जोड्ने बिचौलियाहरू आलोचना र हेलाको पात्र पनि बनिरहन्छन् । नेपालको कृषिबजार गन्जागोल हुनुको कारण नै यही हो । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्न तरकारीमा कर अनिवार्य गरिनुपर्छ । कर धेरै नलिने हो भने त्यसको दर न्यून राख्न सकिन्छ । कर लिनेबित्तिकै त्यसको हिसाबकिताब राख्नुपर्छ, बिलबीजक पनि चाहिन्छ । सबै कारोबार पारदर्शी हुन्छ ।
अहिले कर नतरिरहेका तरकारी व्यापारीहरू पक्कै पनि करको दायरामा आउन चाहन्नन् । तर, उनीहरूलाई केही सुविधा दिएर करमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यस्तो करको उद्देश्यबाट राजस्व बढाउनेभन्दा पनि कृषिको मूल्य (आपूर्ति) शृङ्खलालाई प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने हुनुपर्छ ।
सीएमसीसँग ठेक्का तोडिएपछि तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको बाँध बनाउन नयाँ टेण्डर आह्वान
दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित संकुचन ! सन् २००८ यताकै सबैभन्दा खराब अवस्था
४ हजार पुनर्निर्माण प्राविधिकले दिए सामूहिक राजीनामा, सरकारले सहमति उल्लंघन गरेको आरोप
माइक्रोसफ्टको बजार पूँजीकरण १० खर्ब माथि
रघुराम राजन बीओई गभर्नरको सम्भावित उम्मेदवार
रोकियो सेन्सबरीज–आस्डा मर्जर
बागलुङ नगरपालिकामा पहिलो पटक चिया खेती
एनसेलबाट तत्काल कर नअसुल्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, अर्को सुनुवाई कहिले ?
कमोडिटी एक्सचेञ्जका लागि नयाँ आवेदन माग, धितोपत्र बोर्डले किन रद्द गर्‍यो ५ कम्पनीका पुराना आवेदन ?
आँटिलोले मात्र गर्न सक्ने भीरमहको शिकार